दही खान नजान्दा बिष पनि बन्न सक्छ ! दही कहिले र कसरी खाने ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य दही खान नजान्दा बिष पनि बन्न सक्छ ! दही कहिले र कसरी...
२०७५, ३ फाल्गुन शुक्रबार २२:१७
एजेन्सी । दही सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा अनेक लाभ मिल्छ । तर, दही खाने समय र तरिकामा भने ख्याल गर्नुपर्छ । किनभने दही गुणकारी हुँदाहुँदै पनि यसको सेवन गर्ने विधि र समय थाहा नहुँदा यो विषाक्त बन्न पुग्छ । दही स्वाद र स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन, सौन्दर्यका लागि पनि उत्तिकै उपयोगी मानिन्छ । दहीमा केहि यस्ता तत्व हुन्छ, जसले पाचन क्रियालाई चुस्त राख्न सहयोग गर्छ ।
Previous article(सफलताको कथा) लगनशीलताले नै बनायो होटलको मालिक
Next articleकांग्रेस म्याग्दीको भवन देउवाले उद्घाटन गर्ने